Otu esi emepụta echiche di n'ime maka onye ahia ohuru | Martech Zone
Nke a bụ ihe na-akpali mmasị infographic na-eke ọdịnaya echiche maka a ọhụrụ ahịa ma m na na na na m na-ekweta na mkpokọta nduzi nke atụmatụ. M n'ezie ga-tụgharịa a kpodoro isi ala na-amalite na onye onye ahia ya bu - ọ bụghị onye ụlọ ọrụ ahụ bụ. Mgbe ahụ, m ga - ekpebi uru ị nwere ike ịnye onye ahịa ahụ… wee rụọ ọrụ n’ebe ahụ. Ekwenyere m na ọtụtụ ụlọ ọrụ na-emehie nke ịdabere ọdịnaya ha gburugburu onwe ha karịa gburugburu ndị ahịa ha.
Ibe oghere nwere ike ịbụ ihe na-eyi egwu, ọkachasị mgbe ị na-amalite ọrụ ọdịnaya maka onye ahịa ọhụụ. Mana ibuputa echiche abughi ihe siri ike dika odi. Zụlite echiche ọhụrụ ndị ahịa gị ga-ahụ n'anya dị mfe dịka ịgbaso usoro ole na ole. Via Detuo
Yabụ… usoro m ga - abụ 5, 3, 2, 4 wee bụrụ 1! Tinye onye ahịa gị mgbe niile na atụmatụ ọdịnaya gị. Ndị ahịa anaghị eche banyere ụlọ ọrụ gị, ha na-eche maka ngwaahịa na ọrụ yana otu ha ga-esi rite uru na ha. Ree onye ahịa ka onye ahịa ya chọpụta ihe bara uru - nyezie ya. Aga m agbakwunye na ọ bụghị ọdịnaya niile ga-adakọrịrị na ebumnuche gị. Ka nwere ike inye uru na ire ahịa ọdịnaya site na ịnye uru maka ebumnuche ndị ahịa!
Anyị na-ejikọkarị ndụmọdụ banyere ịzụ ahịa dị ukwuu na blọọgụ a nke na-arụtụ aka na mpụga akụ. Ọ bụghị ihe mgbaru ọsọ nke anyị ịkwaga ndị folks na saịtị ọzọ ebe ha na-agaghị eso anyị tụgharịa ma ọ bụ onye nkwado! Mana ọ na - eme anyị ezigbo akụ iji laghachi na mgbe onye ọbịa chọrọ ozi oge ọzọ.
Tags: ahịaihe di n’imecontent Marketing
Oge mbughari: Nhazi oge nke Web
Nov 25, 2013 na 2:35 PM
Ndewo Douglas, daalụ maka ịkekọrịta Infographic CopyPress anyị! Ekwenyere m na gị na ndị ahịa ndị ahịa bụ ihe dị mkpa na ekwesịrị itinye ya n'ọnọdụ ahụ. Echere m na n'ịgbalị ime ka IG dị mkpụmkpụ, anyị dara ịgbakwunye ajụjụ ahụ "Whonye bụ ndị na-ege ntị / ndị bụ ndị ahịa ahụ? Gịnị na-amasị ha? ” Eleghi anya anyi kwesiri ime ka nke a ghọọ IG. http://community.copypress.com/ideation-guide/who-is-the-audience/
Nov 25, 2013 na 4:09 PM
Echere m na nke ahụ ga - eme ezigbo infographic, @raubimarieperilli: disqus.
Nov 25, 2013 na 10:17 PM
Ọzọ dị ukwuu post Douglas! Ihe omuma ihe di nma .. Daalụ maka ịkekọrịta!
Dec 4, 2013 na 2:01 PM
Amen, Amen na Amen. Ndị ahịa nwere ike ileghara etu ejiji gị anya ma ọ bụ etu ụlọ ọrụ cdo gị siri dị ma ọ bụ ọnụahịa ahụ! Kedụ ka ngwaahịa ma ọ bụ ọrụ gị si erite uru ha! Ọ bụrụ na ha achọghị ka ọ kwuo okwu maka oge gị, kpochapụ "onye a na-enyo enyo" wee gaa ịchọta "atụmanya."